🥇 သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး၏စာရင်းကိုင်နှင့်ထိန်းချုပ်မှု
အဆင့်သတ်မှတ်ချက်: 4.9. အဖွဲ့အစည်းအရေအတွက်: 320
ကျွန်ုပ်တို့၏ USU-Soft universal အစီအစဉ်မှတစ်ဆင့်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးများကိုစာရင်းကိုင်ခြင်းသည်ကုမ္ပဏီ၏အဓိကရှုထောင့်အားလုံးကိုထိန်းချုပ်ရန်သင့်အားကူညီသည်။ သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး၏ဖွဲ့စည်းခြင်းနှင့်စီမံခန့်ခွဲမှုတစ်ခုတည်းသတင်းအချက်အလက်ထိန်းချုပ်မှုစနစ်ကနေဖျော်ဖြေနေကြသည်။ ကုမ္ပဏီ၏ ၀ န်ထမ်းအားလုံးသည်နည်းပညာကွင်းဆက်တစ်ခုအနေဖြင့်၎င်းတွင်အလုပ်လုပ်ကြလိမ့်မည်။ သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးထိန်းချုပ်မှု၏စာရင်းကိုင်အစီအစဉ်ကိုဖောက်သည်များအနေဖြင့်တစ် ဦး ချင်းစီအမိန့်များ၏အခြေအနေတွင်နှင့်အမိန့်စုစည်းခဲ့ကြသည်ဘယ်လိုနှစ် ဦး စလုံးသတင်းအချက်အလက်ဖော်ပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးစီမံခန့်ခွဲမှုထိန်းချုပ်မှုစနစ်တွင်အသုံးပြုသူတစ် ဦး ချင်းစီအားအခွင့်အလမ်းအချို့ရရှိသည်။ သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးများကိုစာရင်းကိုင်ရန်ထိန်းချုပ်သည့်အစီအစဉ်၏လည်ပတ်မှုအခြေခံမူများနှင့်ချဉ်းကပ်မှုသည်ဖောက်သည်များ၏အထူးပြုမှုပေါ် မူတည်၍ ကွဲပြားနိုင်သည်။ ၎င်းသည်ကုန်တင်ယာဉ်များကိုစီမံခန့်ခွဲခြင်းနှင့်လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး၊ ရထားလမ်းစီမံခန့်ခွဲခြင်းစသည်တို့ဖြစ်သည်။
သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးစာရင်းကိုင်တွင်၎င်း၏ကိုယ်ပိုင်လက္ခဏာများလည်းရှိကြောင်းသတိရသင့်သည်။ သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးစီမံခန့်ခွဲမှုအားကုမ္ပဏီ၏ ၀ ဘ်ဆိုဒ်နှင့်အခြားသောစနစ်များနှင့်တစ်ပြိုင်တည်းချိန်ကိုက်နိုင်သည်။ ခရီးသည်နှင့်ကုန်တင်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးကိုအလိုအလျောက်လုပ်ဆောင်ခြင်းသည်မည်သည့်မန်နေဂျာမဆို၏အရေးအကြီးဆုံးလုပ်ငန်းတာဝန်ဖြစ်သည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်အဖွဲ့အစည်း၏အမှာစာများ၊ ၀ င်ငွေနှင့်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သည့်ကုမ္ပဏီများ၏လေးစားမှုသည်ဤအပေါ်မူတည်သည်။
သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးထိန်းချုပ်မှုသည်ဖောက်သည်များနှင့် ပူးပေါင်း၍ စတင်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့ကမ်းလှမ်းသောလျှောက်လွှာတွင်ဖောက်သည်များနှင့်ဆက်သွယ်ရန်ကိရိယာအစုံအလင်ရှိသည်။ ရလဒ်အနေနှင့်သင်သည်သင်၏ ၀ န်ဆောင်မှုများကိုအကောင်းဆုံးနည်းဖြင့်ပြန်ပေးနိုင်သည်။ ဖောက်သည်များကိုဆက်သွယ်ရန်နံပါတ်နှင့်စသည်တို့ကဲ့သို့လိုအပ်သောအချက်အလက်အားလုံးနှင့်အတူမှတ်ပုံတင်ရန်ဖြစ်နိုင်ချေရှိသည်။ ၎င်းသည်သင်၏ဖောက်သည်များနှင့်အဆက်အသွယ်ပြုလုပ်ရန်အပြင်အစီအစဉ်အစည်းအဝေးများနှင့်စေ့စပ်ညှိနှိုင်းမှုများကိုသင့်အားခွင့်ပြုသည်။ USU-Soft ထိန်းချုပ်မှုစနစ်ဖြင့်ထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေးသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးစီမံခန့်ခွဲမှုသည်လျှောက်လွှာတိုင်းကိုဘယ်သောအခါမျှဂရုမပြုမိစေရန်သေချာစေသည်။ ၎င်းတို့တစ်ခုစီကိုအဆင့်အတန်းဖြင့်မှတ်သားထားသောကြောင့်၊ ဖောက်သည်၏တောင်းဆိုချက်အရသင်အပိုထပ်ဆောင်း status များကိုထပ်ထည့်နိုင်သည်။ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအသွားအလာကိုအလိုအလျောက်စာရင်းပြုခြင်းသည်လျှောက်လွှာများ၊ စာချုပ်များစသည်တို့ဖြစ်သည်။ စီမံခန့်ခွဲမှုစာရင်းကိုင်စနစ်တပ်ဆင်ခြင်းသည်သင်၏အဖွဲ့အစည်း၏ဂုဏ်သိက္ခာကိုတိုးမြှင့်စေရန်များစွာအထောက်အကူပြုသည်။
USU-Soft application ဖြင့်အဖွဲ့အစည်းဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှုသည်လုပ်ငန်းစဉ်များအားလုံးကိုထိန်းချုပ်ရန်အခွင့်အလမ်းပေးသည်။ သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးထိန်းချုပ်မှု၏စာရင်းကိုင်အစီအစဉ်ကိုတပ်ဆင်နှင့်အတူဘဏ္managementာရေးစီမံခန့်ခွဲမှုပိုမိုအောင်မြင်သောဖြစ်လာဖို့သေချာပါသည်။ အထွေထွေအင်္ဂါရပ်များပေါင်းထည့်ခြင်းအားဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်သင့်အားအမျိုးမျိုးသောအခွင့်အရေးများပေးသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ ၀ က်ဘ်ဆိုက်မှအကြောင်းအရာအလိုက်အစီအစဉ်ရေးဆွဲခြင်းကိုအခမဲ့ရယူနိုင်ပါသည်။ သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးထိန်းချုပ်မှု၏စာရင်းကိုင်အစီအစဉ်ကိုအားလုံးစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရဲ့လှုပ်ရှားမှုများ၏ထိရောက်မှုကိုတိုးမြှင့်စေမည်သည့်သတင်းပို့စီမံခန့်ခွဲမှုမှလွယ်ကူသော access ကိုပေးသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏လျှောက်လွှာနှင့်အတူလုပ်ငန်းခွင်အလိုအလျောက်လုပ်ဆောင်ခြင်းသည် ၀ န်ထမ်းများ၏လုပ်ငန်းကိုပိုမိုကောင်းမွန်စေသည်၊ ထိုကဲ့သို့သောအဆင့်မြင့်သတင်းအချက်အလက်စနစ်များကိုပြုလုပ်ခြင်းသည်တာ ၀ န်ယူပြီးအချိန်ကုန်သောတာဝန်ဖြစ်သည်။ ငါတို့သည်သင်တို့အရည်အသွေးမြင့်ထုတ်ကုန်ကိုဆက်ကပ်! စာရင်းကိုင်ထိန်းချုပ်မှုအစီအစဉ်တွင်ပြုလုပ်သောစီမံခန့်ခွဲမှုဆန်းစစ်ချက်သည် ၀ န်ထမ်းတစ် ဦး ချင်းစီ၏လုပ်ဆောင်မှုများကိုသရုပ်ဖော်ထားပါသည်။ စာရင်းအင်းထိန်းချုပ်မှုအစီအစဉ်ကိုအသုံးပြုသောအခါလုပ်ငန်း၏မဟာဗျူဟာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုသည် ပို၍ အောင်မြင်ပြီးမျှတမှုရှိလာသည်။ ကုန်ပစ္စည်းများကို Excel စာရင်းကိုင်ခြင်းသည်လက်ရှိစီးပွားရေးပမာဏနှင့်မကိုက်ညီပါ။ စာရင်းကိုင်ထိန်းချုပ်မှုအစီအစဉ်သည်သင့်အားသတင်းအချက်အလက်နှင့်အလုပ်လုပ်ရန်သာမကသင်လိုအပ်သရွေ့၎င်းကိုမော်ကွန်းတိုက်တွင်သိမ်းထားရန်ခွင့်ပြုသည်။
အသုံးပြုသူအသစ်များကိုထည့်ခြင်းနှင့်၎င်းတို့အားရယူပိုင်ခွင့်ကိုသတ်မှတ်ပေးခြင်းသည်ရှုပ်ထွေးခက်ခဲသောလုပ်ငန်းစဉ်မဟုတ်ပါ။ ထိန်းချုပ်မှု၏သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးစီမံခန့်ခွဲမှုအစီအစဉ်တွင်လျှောက်လွှာတစ်ခုချင်းစီ၏ဘဏ္sideာရေးဘက်၏စာရင်းကိုင်ပါဝင်သည်။ အကယ်၍ သင်သည် application တစ်ခုနှင့်မသက်ဆိုင်သောအခြားငွေကြေးဆိုင်ရာငွေပေးငွေယူများကိုသင်မှတ်ပုံတင်လိုပါကကျွန်ုပ်တို့၏အစီအစဉ်၏အကူအညီဖြင့်သင်အလွယ်တကူပြုလုပ်နိုင်သည်။ စာရင်းကိုင်ဆော့ဖ်ဝဲတွင်အခြားစိတ်ဝင်စားဖွယ်ကောင်းသောအင်္ဂါရပ်များစွာရှိသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ဝက်ဘ်ဆိုက်မှအခမဲ့သရုပ်ပြဗားရှင်းကိုဒေါင်းလုပ်ဆွဲခြင်းအားဖြင့်သူတို့ကိုသင်ကိုယ်တိုင်တွေ့ကြုံခံစားနိုင်သည်။
စီမံခန့်ခွဲမှုသည်ခေတ်မီဆက်သွယ်ရေးလမ်းကြောင်းများနှင့်နည်းပညာဆိုင်ရာနည်းလမ်းအားလုံးနီးပါးနှင့်ပေါင်းစပ်ထားသောကြောင့်စီမံခန့်ခွဲမှုက ပို၍ ယုံကြည်စိတ်ချရရုံသာမကခေတ်မီလာသည်။ ဆော့ဖ်ဝဲလ်ကိုဗွီဒီယိုကင်မရာများနှင့်ပေါင်းစပ်ခြင်းသည်အလိုအလျောက်ဗွီဒီယိုထိန်းချုပ်မှုနှင့်ယာဉ်များနှင့်ဖောက်သည်များအားအသိအမှတ်ပြုခြင်းများကိုပေးသည်။ ဂိုဒေါင်တွင်ပစ္စည်းကိရိယာများနှင့်ပေါင်းစပ်ခြင်းသည်ခိုးယူမှုမှကာကွယ်ရန်ကူညီပါလိမ့်မည်။ ၀ ဘ်ဆိုဒ်နှင့် PBX တို့နှင့်ဆက်သွယ်မှုသည်ဖောက်သည်အသစ်များကိုဆွဲဆောင်ရန်အခွင့်အလမ်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ ကုန်ပစ္စည်းလမ်းကြောင်းများသည်ပိုမိုမြန်ဆန်စွာနှင့်ပိုမိုတိကျမှန်ကန်စွာရေးဆွဲသွားမည်ဖြစ်သော်လည်းအထူးကျွမ်းကျင်သူများကအချိန်၊ အမျိုးအစား၊ သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးလိုအပ်ချက်များ၊ ဖောက်သည်များ၏ဆန္ဒများကိုအများဆုံးမယုံနိုင်လောက်သောအရေအတွက်နှင့်အချက်များပေါင်းစပ်မှုကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားနိုင်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏စနစ်ဖြင့်တင်ပို့မှုတစ်ခုစီကို၎င်း၏အစမှအဆုံးအထိထိန်းချုပ်နိုင်သည်။ အဆိုပါ dispatch သည်အီလက်ထရောနစ်မြေပုံများကို အသုံးပြု၍ geolocation အချက်အလက်များကိုအဓိကထားလေ့လာမည်ဖြစ်သည်။ ယာဉ်မောင်းများသည်သူတို့မြင်တွေ့ရသည်ကိုသိပြီးလမ်းကြောင်း၊ အချိန်နှင့်စည်းကမ်းချက်များကိုချိုးဖောက်လိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။ စာရင်းကိုင်ထိန်းချုပ်မှုအစီအစဉ်သည်မှန်ကန်သောနှင့်တိကျသောဖော်မြူလာများကို အသုံးပြု၍ မော်တော်ယာဉ် ၀ န်ဆောင်မှုများ၏ကုန်ကျစရိတ်နှင့်ကုန်ပစ္စည်းများကိုတွက်ချက်သည်။ ကွဲပြားခြားနားသောစျေးနှုန်းစာရင်းများအရ၊ မတူညီသောအကောက်ခွန်နှုန်းထားများအရ၊ သုံးစွဲသူတစ် ဦး စီအားပေးအပ်သည့်သီးခြားသတ်မှတ်ချက်များအရဖြစ်နိုင်သည်။
မည်သည့်နည်းပညာတွက်ချက်မှုကိုမဆိုအမြဲတမ်းတိကျစွာပြုလုပ်ရန် software ကခွင့်ပြုသည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်ထိန်းချုပ်မှုအစီအစဉ်တွင်အီလက်ထရောနစ်လမ်းညွှန်များကိုအလွယ်တကူဖွဲ့စည်းနိုင်သည်။ သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးတွင်အသုံးပြုသောယာဉ်များကိုစက်ရုံမှအချက်အလက်များနှင့်အညီဖော်ပြနိုင်သည်။ သို့မဟုတ်မည်သည့်အီလက်ထရောနစ်ဖိုင်တွင်မဆိုရည်ညွှန်းအချက်အလက်ကိုဒေါင်းလုပ်ဆွဲ။ ဆော့ (ဖ်) ဝဲထဲထည့်နိုင်သည်။